नेताको नियतले नेविसंघमा कुटाकुट ! - JagaranPost
Home/Uncategorized/नेताको नियतले नेविसंघमा कुटाकुट !
भाषणमा लोकतान्त्रिक व्यवहारमा ‘हुकुमी’ भएपछि के हुन्छ ? यसको सही जवाफ नेविसंघ नेता तथा कार्यकर्ताले मात्र दिन सक्छन्। किनकी लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया अपनाउन नसकेको पीडा नेविसंघ नेता र कार्यकर्तालाई मात्र राम्ररी थाहा छ। त्यसको परिणाम आइतबार पार्टी कार्यालय सानेपामा देखियो।
लामो समय कांग्रेस छोडेर फेरि घर फर्किएका विजयकुमार गच्छदार कपिलेश्वर यादवलाई अध्यक्ष बनाउन चाहन्छन्। यादव गच्छदारको पूर्व पार्टी फोरम लोकतान्त्रिक विद्यार्थी संघका पूर्वअध्यक्ष हुन्। पार्टी एकता भएपछि उनलाई नेविसंघ उपाध्यक्षमा मनोनित गरिएको थियो। केही साता अगाडि नयाँ बानेश्वरमा भएको आन्दोलनका क्रममा उनी घाइते भएका थिए। यादवलाई गच्छदारले प्रस्ताव गरेपछि देउवालेसमेत समर्थन जनाएको स्रोतको दाबी छ- अन्नपूर्ण पोस्टबाट।